निमोनियाले के गर्छ ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ निमोनियाले के गर्छ ?
निमोनियाले के गर्छ ?
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७५ चैत्र २५ गते, १०:३८ मा प्रकाशित
डा. केदार सेन्चुरी, जनरल फिजिसियन
निमोनिया श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित एक प्रकारको रोग हो । हाम्रो शरीरमा दुईवटा फोक्सो हुन्छन् । फोक्सोमा ठूलो श्वासनली, सानो नली, ब्रोंकाइलगायत विभिन्न खालका टिस्यु हुन्छन् । यिनै टिस्युमा कुनै कारणले संक्रमण भएर फोक्सोको कुनै क्षेत्र वा पूर्ण फोक्सोमा संक्रमण भएपछि हामीलाई निमोनिया हुन्छ । यस्ता संक्रमणले कहिले फोक्सोको तल्लो भागलाई त कहिले मथिल्लो भागलाई असर गरिरहेको हुन्छ । निमोनिया फरक–फरक कारणले लाग्छ । त्यसकारण पहिले कारण पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ । भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगल्सका कारण संक्रमण हुने गर्दछ । यिनै संक्रमणसँग जुध्न नसकेपछि फोक्सोको नियमित काममा असर पर्छ । ब्याक्टेरिया, भाइरस वा फंगल्सले फोक्सोको प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट गर्छ र त्यसका टिस्युहरूमा संक्रमण फैलाउँदै जान्छन् । फोक्सोका टिस्युलाई संक्रमण गरेपछि पानी जम्ने, पिप जम्ने र कहिलेकाहीँ हावा जम्ने हुन्छ ।
बच्चा र वृद्ध बढी जोखिममा
हाम्रोमा कुनै उमेर विशेषको निमोनिया भएको देखिँदैन । विशेषगरी बालबालिका र वृद्धालाई बढी जोखिम भए तापनि युवाहरूमा पनि प्रशस्तै निमोनियाको संक्रमण भएको पाइन्छ । बच्चाहरूको फोक्सो पूर्ण रूपमा विकसित भइनसकेको हुँदा निमोनियाले सजिलै संक्रमण गर्न सक्छ । त्यसका साथै उनीहरूको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर हुने हुँदा सधैँ जोखिम समूहमा पर्छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा नवजात शिशु हुन्छन् । त्यसैगरी, उमेर ढल्कँदै गएका वृद्धको पनि फोक्सोका टिस्युहरूमा विभिन्न कारणले गर्दा असर पुगिरहेको हुन्छ । अझ उनीहरूमा कडा खालको दम, मुटुको रोगले पनि सताउने सम्भावना रहेको हुन्छ । यस्तो समस्या भएकालाई सामान्य चिसो वा रुघाखोकी लाग्दा पनि निमोनियाको संक्रमण चाँडै हुन सक्छ । स्वभावैले उमेर ढल्कँदै जाँदा रोगप्रतिरोधी क्षमतामा पनि कमी हँुदै जान्छ र निमोनिया संक्रमण चाँडै हुन्छ । दीर्घरोगीहरूमा पनि उस्तै निमोनियाको अर्को उच्च जोखिम समूह भनेको दीर्घरोग भएका र अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति हुन् । खासगरी लामो समयदेखि औषधि सेवन गरिरहेका, अंग प्रत्यारोपण भएका बिरामी, दीर्घरोग, फोक्सो, मुटुसम्बन्धी रोग भएका बिरामीलाई चाँडो निमोनियाले सताउन सक्छ । एचआइभी एड्स संक्रमित बिरामीलाई पनि निमोनिया हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
निमोनियाले के गर्छ ?, बच्चा र वृद्धमा बढी जोखिम
निमोनियाले बिगार्ने भनेको फोक्सो हो । फोक्सोको काम भनेको बाहिरको स्वस्थ हावा लिएर शरीरलाई चाहिने अक्सिजन पूर्ति गर्ने र कार्बनडाइअक्साइड बाहिर फाल्ने हो, त्यसले श्वासप्रश्वास नियमित हुन दिँदैन । फोक्सो नै स्वस्थ नभएपछि हामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ । फोक्सोमा संक्रमण भएपछि हावालाई छान्ने काम हुन सक्दैन । त्यसले आवश्यक मात्रामा अक्सिजन शरीरले पाउँदैन । यसको असरले श्वासप्रश्वास अवरुद्ध भई समस्या सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ । निमोनियाको उपचार समयमै हुन सकेन भने अन्य विभिन्न किसिमका समस्या थपिँदै जान्छन् । यस्तो अवस्थासम्म समस्या बढ्दै गए संक्रमण भएको फोक्सोको भाग नै काट्नुपर्ने हुन सक्छ ।
 फोक्सोमा भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगल्सको संक्रमण । रुघाखोकी बिग्रिएर निमोनिया हुन्छ ।
 कहिलेकाहीँ रुघाखोकी नलागी अन्य समस्याका कारण पनि हुन सक्छ ।
 एकपटक निमोनिया भएको छ र पूर्ण रूपमा उपचार भएन भने पटक–पटक दोहोरिन सक्छ ।
 संक्रमित मानिससँगको असुरक्षित संसर्गबाट पनि निमोनियाको सम्भावना बढी हुन्छ ।
 फोक्सोसँग सम्बन्धित समस्या भएकाहरूलाई निमोनियाको उच्च जोखिम हुन्छ ।
निमोनिया सरुवा हो कि होइन ?
सबै निमोनिया सर्छ भन्ने हँुदैन । निमोनिया लागेका बिरामीको शरीरमा किटाणु स्थिर भएर बसिसकेको छ भने सर्ने स्म्भावना कम हुन्छ । तर, स्थायी भइनसकेको अवस्थामा श्वासप्रश्वासका माध्यमबाट सर्न पनि सक्छ । तर, यो भाइरलजस्तो चाँडै सर्ने होइन । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । ब्रोंक्राइटिस भएका, फोक्सोसँग सम्बन्धित समस्या भएकाहरूलाई अन्य किसिमका संक्रमण भएमा तुरुन्त निमोनिया संक्रमण हुन सक्छ ।
 धुवाँ–धुलोबाट बच्ने ।
 रुघाखोकी लागेका मान्छेको सम्पर्कमा नजाने ।
 बच्चालाई निमोनियाको खोप दिने, कुपोषण हुन नदिने ।
 चिसोबाट जोगाउने, वृद्धलाई सामान्य इन्फेक्सन छ भने वेलैमा उपचार गराउने ।
 रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएकालाई पनि वेलैमा जाँच गराउने, लामो समय रुघाखोकी निको नभए रगत जाँच गराउने ।  चुरोट, बिँडी नखाने, खाने गरेको छ भने बन्द गर्ने ।
 निमोनियाको औषधि चिकित्सकले दिएको समय अवधिभर नछोडी सेवन गर्नुपर्छ । बीचमा छोड्यो भने ब्याक्टेरियाको क्षमता औषधिको भन्दा बढ्न गई पुन: बल्झन सक्छ र सो औषधिले काम नगर्न सक्छ ।
 रुघाखोकीमा हेलचेक्रयाइँ नगर्ने ।
(डा. सेन्चुरी सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक हुन्)